oluzenzekelayo ice ibhokisi cookies eyenzelwe umatshini wokwenza cookies
Le cookie eyenzelwe ungenziwa ngemfuneko kunye kuyilo iindidi. Kubonakala iindlela ezininzi ukwenza cookie, ezinye iivenkile ezincinane namakhosikazi nenze ukutya ngesandla, ukuba unalo ngexabiso emangalisayo kunye nabantu yobudala eyahlukeneyo like this ukutya.
MOQ 1 iseti
ubunzima Product 5-200g / pc
Ixesha lokukhokhela 7 iintsuku zokusebenza ukuba umatshini 1 iseti
lobukhulu 167 * 92 * 129cm
ubunzima machine 400kg
1) Kufaka Protection kunye iqhosha Emergency Stop ukusebenza ekhuselekileyo.
2) Ubunzima, ubungakanani kunye uqweqwe-nokuzaliswa-ratio ayikwazanga kulungelelaniswa ngokufanele njengoko kuyimfuneko.
3) nomgangatho woposo: ukusebenza ukuvelisa iindidi ezahlukileyo zokutya ngokutshintsha ngumngundo nje.
5) iintlobo ezininzi cookies ngumngundo singayilwa.
6) wena Umatshini, siya ungadibanisa ezinye iinkqubo umatshini kumatshini.
7) IsiNgesi, IsiTshayina ulwimi, Arabic zizodwa ..
8) uqeqesho ziya kufundiswa xa umatshini uvavanyo umthengi.
Previous: Umhla oluzenzekelayo bar umatshini wokwenza bar iziqhamo
Next: cookies ezijijekileyo umatshini wokwenza oluzenzekelayo
cookies Automatic Making Machine
Chocolate ezizalisiweyo Cookies Machine
cookies Ukuzalisa Machine
Cookies Ukwenza Machine
Yadalwa Cookies Machine
ezizalisiweyo Cookies Machine
Ezincinane Cookies Machine
Small ezizalisiweyo Cookies Machine
Wire mgawuli Cookies Machine
oluzenzekelayo Umatshini chicken wokwenza coxinha Brazilian
kubba oluzenzekelayo kibbeh kubbeh umatshini wokwenza
umbala ngokuzenzekelayo double azabi cookies egcwele ...
Zenzekelayo Umatshini umbala wokwenza umqathane kabini